I-Snapchat ihlaziywa ngeefilitha zeekati | I-Androidsis
Yintoni entsha kwi-Snapchat: Iifilitha zilapha ikati yakho
Emva kwantoni ngene ulahlekelwe linani elikhulu labasebenzisi ngohlaziyo olutsha lwe Amabali e-Instagram, kubonakala ngathi le nethiwekhi yentlalo yokufota ayinakuphinda isetyenziswe kwinqanaba elifanayo ne-Instagram okanye i-Twitter, kude kube ngoku: ngohlaziyo olutsha esilunikwa sesi sicelo, iifilitha zeekati kwakhona zithatha ingqalelo yabasebenzisi abaninzi Ngoobani Baya ku-Instagram emva emini.
Kwaye i-Snapchat ibhengeze, ngeakhawunti yayo esemthethweni ye-Twitter kutsha nje, oku phucula ukwenzela ukuba abathandi bekati basebenzise ezi zihluzo zingathandabuzekiyo kubanini bezilwanyana zabo ezifuyiweyo.
Kude kube kutshanje, ezi zihluzo zinokusetyenziswa kuphela ebusweni babantu, kwaye kwezinye iimeko ngokuzikhethela, kwezinye izinja, nangona bezingasoloko zisebenza ngokuchanekileyo. Nangona kunjalo, ngoku Uhlaziyo lukaSnapchat ikuvumela ukuba ububone ubuso bekati kwaye usebenzise imaski ehlekisayo. Ikwayilelwe ngokugqibeleleyo ukuze ihlale isebenza ngaphandle kweengxaki nakweyiphi na imeko.
I-Snapchat kunye neefilitha ezintsha zeekati: amaphiko, iiglasi, nokunye okuninzi
Isicelo sibonakala sisebenza ngokufanelekileyo, sihlala sihlala sijonga ubuso beekati, ukuze ukwazi ukongeza iimpondo ze-unicorn, isithsaba seentyatyambo, iiglasi, amaphiko kunye nezinye iindlela ezininzi zokunxibelelana kwezentlalo okuya kubandakanya kancinci kancinci. Ukongeza, into ebalulekileyo kukuba kuya kubakho ukhetho kubanini abanokuthi bafakwe kwifoto kunye neemaski ezifanayo neekati, ngendlela yokuba iziphumo zale mifanekiso zimnandi ngakumbi.
Sebenzisa ezi Iifilitha ngeekatiInkqubo emayilandelwe ilula ngokwenyani njengoko isebenza ngendlela efanayo emntwini: kufuneka ugcine umnwe wakho ebusweni besilwanyana imizuzwana embalwa ukuze isicelo siqaphele ubuso, sakuba samkelwe, zonke ngokuzenzekelayo phuma ukhetho lokucoca ukuze ukhethe eyona uyithandayo!
Olu hlaziyo lutsha olusetyenzisiweyo nguSnapchat kubonakala ngathi lube nefuthe elikhulu kuthungelwano lwezentlalo olugcwele iifoto ngabathandi bekati kunye nezilwanyana zasekhaya. Okokugqibela, ukuba uyafuna zama zonke iindaba eziza kuSnapchat Sishiya ikhonkco ukuze ukhuphele usetyenziso olusemthethweni kwivenkile yesicelo sikaGoogle.
Umthuthukisi: Snap Inc
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Yintoni entsha kwi-Snapchat: Iifilitha zilapha ikati yakho
Ungarhoxisa njani ukuthumela i-imeyile kwi-Gmail ye-Android